R/wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon & Waftigiisa oo Cadaado Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyey |
R/wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon & Waftigiisa oo Cadaado Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyey
R/wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cabdi Faarax Shiirdoon iyo waftiga uu horkacayo ayaa galabta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb waftiga R/wasaaraha ayaa waxaa Cadaado si diiran ugu soo dhaweeyey maamulka iyo shacabka magaaladaas oo aan u kala harin.
Madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb Max’ed Aadan Tiicey ayaa si niyadsami ah waftiga R/wasaaraha ugu soo dhaweeeyey magaalad Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb, wuxuuna ku tilmaamay booqashada waftiga R/wasaaruhu uu ku tagay degmada Cadaado mid Taariikhi ah isagoona muujiyey sida ay shacabka iyo maamulka Ximan iyo Xeeb ugu faraxsan yihiin imaanshaha waftiga ballaaran ee ka socda dowlada Soomaaliya.
R/wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon Saacid ayaa shacabka iyo maamulka magaalada Cadaado uga mahad celiyey sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen,wuxuuna sidoo kale sheegay in waftigiisu ay ku faraxsan yihiin booqashadooda magaalada Cadaado isagoona ku amaanay horu marka iyo amniga ka jira magaalada Cadaado.
W/wasaare Saacid ayaa hoosta ka xariiqay iney tahay wax lagu farxo horu marka la taaban karo ee ka jira Cadaado wuxuuna tibaaxay in dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arimiyo maamulka Ximan iyo Xeeb ay yihiin dad horumarka deegaankooda gacamahooda ku samaystay isagoona ku booriyey iney sii wadaa horumarka dhanka walba ah ee ay ku tallaabsadeen iney halkooda kasii wadaan.
Wasiirka koowaad ee xukuumada Soomaaliya Cabdi Faarax Shiirdoon Saacid oo ay wehlinayaan wafti ballaaran oo ka socda golaha wasiirada,golaha baarlamaanka iyo saraakiisha ciidanka ayaa inta ay Cadaado ku sugan yihiin waxa ay wada hadalo la yeelan doonaan masuuliyiinta iyo shacabka magaalada Cadaado.